Feo avy any Zimbaboe sy ireo Farihy Lehibe (Grands Lacs) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2019 9:08 GMT
Taorian'ny fivakisana sarotra, latsaka tao anatin'ny adihevitra vaovao ny MDC (mpanohitra) ao Zimbaboe taorian'ny fanafihana an'i Gertrude (Trudy) Stevenson . Stevenson, izay nifanaraka tamin'ny rantsana “mpomba ny antenimieran-doholona” an'i Arthur Mutambara, no solombavambahoakan'ny fizarantanin'i Harare Avaratra miaraka amin'ny lokon'ny MDC. Kiriko tamin'izany fanafihana izany i Zimpundit.
Mamoaka lahatsoratra ary miresaka mikasika ireo lohateny lehibe mikasika an'i Zimbaboe isanandro ny The Bearded Man.
D.R.C>:Mizara amintsika ny fandraisany ireo fivoaran-draharaha mifandraika amin'ireo fifidianana i Carl ao amin'ny “Because we're here boy no one else; just us”. Ahitana ireto izany; fampitomboana ireo fisafoana ataon'ny tafika an'habakabaka, ny fahatongavan'ny tariky ny Firaisambe Eoropeana, fandrahonana ady nataon'ilay kandidà tamin'ny fifidianana filoham-pirenena raha toa ka tsy mandeha tsara ny fifidianana, ary fikambanana mpanavotra manatsahatra ny asany ao amin'ny firenena.
Mandritra izany fotoana izany, manontany tena i Fleurdafrique raha toa ho tranga ara-tantara vaovao fotsiny ihany ireo fifidianana ireo na ho demokratika:
Malaoi (Malawi): Ao anatin’ity lahatsoratra ity, mitondra teboka iray ana avarapianarana saingy voafintina i Mike, blaogera mpiresaka teknolojia ao amin'ny Hacktivate.
Ogandà: Mankalaza ny zava-bitan'i Ghanaa tamin'ny lalao famaranana ny Fiadiana izay ho Tompondaka Erantany, i Dadennism ao amin'ny Country Boyi,
Tezitra amin'ny Filoha Museveni i Jay's Idle Notes noho ny
Manana zavatra vitsivitsy tokony hodinihana ao anatin'ity lahatsoratra ity i Lovely Amphibian